China Mamwe Power Assemblies fekitori uye vanotengesa | Runau Electronics
Sechigadzirwa chakakosha chemagetsi gungano unit, 3 chikamu chizere-bhiriji rakapfava-kutanga zvikamu zvinowanikwa kuti zviwanikwe neRunau Electronics.
Yakanyanya kushanda kuvimbika uye nenzira kwayo zvazvino nemagetsi eiyo thyristor inofanirwa kutariswa mukugadzirwa. Iyo yakawanda nguva dzazvino uye voltage ye thyristor inofanirwa kusarudzwa kuve nechokwadi chakakwana shiviriro. Kechipiri, mutengo-unoshanda unofanirwa kutariswa. Uye pakupedzisira, izvo zvinodikanwa zvekumisikidzwa kwakanaka uye yakadzikiswa vhoriyamu inofanirwa kutariswa.
Simba rinodzora michina yakagadzirirwa uye kugadzirwa nemagetsi emagetsi zvinhu zvine zvakanakira sarudzo yakapusa, kuvimbika kwepamusoro, yakaderera nzwisisika mutengo, kuiswa kuri nyore, kutaridzika kwakanaka, kukurumidza kusimudzira kumhanya, uye nezvimwe.
Masangano emagetsi akagadzirwa ne thyristor uye diode ayo anowanikwa kuti apiwe:
• Chikamu-chimwe chete chinogadzirisa zambuko bhiriji: kusanganisira imwechete-chikamu yakazara kutonga, hafu kutonga, uye gadziriso bhiriji
• Matatu-chikamu chizere-bhiriji akateedzana: kusanganisira matatu-chikamu chizere kudzora kugadzirisa, matatu-chikamu hafu kudzora kugadzirisa, uye matatu-chikamu gadziriso bhiriji
• Matanho-matanhatu ekugadzirisa mabhiriji akateedzana: kusanganisira matanhatu-chikamu anodzoreka uye asingadzoreke ekugadzirisa mabhiriji
• AC switch switch: inosanganisira imwechete-chikamu uye matatu-chikamu AC switch
Kune mimwe mibvunzo yemagetsi magungano akagadzirwa ne thyristor, diode uye gadziriso yekugadzirisa, kushandura, switch yemagetsi uye kutonga, ndokumbira utibvunze isu, timu inotsigira vatengi ine tarenda uye vane ruzivo mahunyanzvi iri pasi pekushumira.
Mhando dzekutonhora dzemasangano kutonhodza kwemhepo, kutonhodza kwechisikigo, uye kutonhora kwemvura nealuminiamu mbiri uye pombi yekupisa.
Zvikamu zvemakereke masimba emagetsi, RC yekumisikidza capacitor, tembiricha kudzivirirwa, zvakajairika kana yakakosha kutonga zvikamu zvebasa.
Nhatu-Phase anti-yakafanana simba unit inoumbwa nemaviri SCR yakabatana mune anti-yakafanana modhi pane yega yega chikamu kuti uone iyo AC chikamu-inodzorwa voltage mutemo. Imwe neimwe thyristor inoshanda kune inoenderana yakanaka uye yakaipa hafu kutenderera. Saka kuenderana kwemiparameter yemaviri anopesana-akafanana akabatanidzwa SCR akakosha kwazvo pamwe nehunhu hwegedhi uye akabata ma parameter azvino, nezvimwewo kuenderana kwema thyristors akashandiswa kunopa iyo yakanaka uye isina kunaka hafu mafungu ave akaenzana, zvikasadaro izvozvi neDC chinhu chinoyerera kuburikidza neyakagumisa inoratidzwa mota, iyo stator mota ichapiswa kwazvo, ipapo mota ichitenderedzwa ichapiswa uye mota ichakuvadzwa pakupedzisira.
Runau inogona kupa yakakwenenzvera chikamu chinodzorwa thyristor uye inoenderana 3 chikamu anti-yakafanana simba unit mune yepakati voltage ye1200V / 3300V asiwo yakakwira voltage ye4500V / 6500V.
Kuti uzive kutanga kwakapfava uye kuchengetedza 6kV uye 10kV yakakwira magetsi motors, zvinodikanwa kuti ubatanidze maSCR mune anti-yakafanana wozoabatanidza iwo akateedzana kuzadzisa yakakwira voltage kushanda chinodiwa. Chikamu chimwe nechimwe che6kV chinoda 6 thyristors (2 mune anti-yakafanana uye matatu mapoka akateedzana), uye chikamu chimwe nechimwe che10kV chinoda gumi thyristors (2 mune anti-yakafanana, mapoka mashanu akateedzana). Nenzira iyi, iyo voltage inoshivirirwa yega yega thyristor ingangoita 2000V, saka kumberi uye kudzosera kusingadzokororwi kwakatemwa voltages VDSM uye VRSM yeiyo yakasarudzwa thyristor inofanira kunge iri 6500V kana pamusoro. Kuti usarudze ratidziro yazvino ye thyristor, iyo yakatarwa inoshanda yazvino yemota inofanirwa kutariswa. Kazhinji, iyo yakasarudzika yazvino ye thyristor inofanirwa kuve katatu kana mana nguva dzemota yakatarwa zvazvino.
Zvadaro: Inotenderera Rectifier Kunakidza Zvikamu